Cutub ka tirsan ciidanka bilayska ee Puntland oo tababar tayayneed u xirmay. – Radio Daljir
Cutub ka tirsan ciidanka bilayska ee Puntland oo tababar tayayneed u xirmay.
Janaayo 30, 2011 12:00 b 0
Garowe, Jan 30 – Ku dhawaad 210 askari oo ka mid ah ciidanka bilayska ee Puntland, kana kala yimid gobolada Puntland ayaa maanta waxaa ugu soo gabagaboobey tababar tayayneed oo ku salaysan barashada sharuucda bilayska iyo la-macaamilka shacabka.
Madasha tababarka ciidanka loogu soo xirey ayaa waxaa daahfurey Gaashaale Cali Mahamed Cagdheer oo ka sheekeeyay mudadii ciidanku tababarku u socdey, balanqaadka ciidanka ee u adeegidda bulshada iyo adkaynta amniga.
Tababarada noocan ah ayaa qayb ka ah sare u qaadida tayada ciidanka bilayska, iyo qorshaha dawlada ee lagu hormarinayo kartida bilayska.
Waxaana dabadeed hadalka qaatey M/weyne ku xigeenka Puntland Gen. C/samad Cali Shire oo soo xigtey xikmado Soomaaliyeed oo turjumaya aqoontu faa?iidada ay bilayska u leedahay, boogaadiyeyna taliska cusub ee bilayska ee Puntland.
Gen. Shire waxaa uu xusay in mas’uuliyadda 1-aad ee amniga guduhu ay saaran tahay ciidanka bilayska.
Ciidamadii loo xirayay tababarkaan maantey ayaa wajigooda waxaa ka muuqatey dareen farxadeed maadaama la barey cilmi horey uga maqnaa, waxaana Gen. Shire uu iftiimiyay in uu jiro gaabis dhinaca is-dhexgalka ciidanka ah oo uu sheegay in ay muhiim u ah xirfada iyo aqoonta bilayska.
Gen. Shire ayaa khudbadiisii sidoo kale uga hadley inay jirto mararka qaar qaladaad ka dhaca booliska, taasina ay dhib weyn ku tahay ummadda.
Ugu danbeyntii, M/weyne ku xigeenka Puntland Gen. C/samad Cali Shire ayaa ku baraarujiyay boolisku in ay kordhiyaan tacliintooda, ayna jiraan bulsho badan oo aaminsan tacliin darrida booliska.
Maxamed C/llahi Cali ‘Kooshin’,
Bileyska oo qabtay 2 nin oo lagu tuhmay miino dhulka loogu aasay taliyaha ciidanka daraawiishta ee gobolka Mudug.
Ardayda Jaamacadda Bariga Afrika, faraca Galkacyo, oo Galaya Imtixaankii Xillilaha.